Fanamarinana ny voka-pifidianana : Efa am-perinasa ny HCC -
AccueilSongandinaFanamarinana ny voka-pifidianana : Efa am-perinasa ny HCC
Fanamarinana ny voka-pifidianana : Efa am-perinasa ny HCC
Efa mandeha ny fanamarinana izay tanterahin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana amin’ izao fotana izao, miainga amin’ ireo firaketana an-tsoratra ny voka-pifidianana manerana ny nosy. Araka ny lalàna dia manana anjara asa amin’ny fanamarinana ny isam-bato ny HCC, ary manana ny teny farany ihany koa, miainga amin’ny fitarainana tonga eo am-pelatanan’izy ireo. Marihina fa mitovy dika ny firaketana an-tsoratra avy eny amin’ ny srmv, ho an’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana sy ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Araka ny voafaritry ny lalàna tokoa mantsy dia andro iray aorian’ ny fifidianana hatramin’ny faha roapolo ny volana desambra dia efa afaka mitondra ny fitarainany mikasika ny fampielezan-kevitra, sy ny tamin’ ny andron’ny fifidianana ireo kandidà sy ireo olom-pirenena voasoratra anatin’ ny lisi-pifidianana. Aorian’ izay kosa no andrasan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny fitarainana mikasika ny voka-pifidianana, sy izay rehetra manodidina izany. ireo rehetra ireo no antony nilazan’ny filohan’ ity rafi-pitsarana ambony ity, fa tsy hitovy velively ny vokatra avoakan’izy ireo sy ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana izay manana fahefana hanafoana sy hanitsy ny vokatra am-pelatanany, raha toa ka voaporofo ny fitarainana tonga eo am-pelatanan’izy ireo.
Hatreto anefa raha ny voalazan’ny mpiraki-draharaha anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, dia mbola tsy nisy na iray aza fitarainana tonga eo am-pelatanan’izy ireo. Ny mahagaga anefa dia maro no mitaraina, nefa ity rafi-pitsarana ity ihany no hany manana ny fahefana mandray izany. Ny zava-misy amin’ izao fotoana ihany koa maro ireo kandidà milaza fa betsaka ny tsy fahatomombanana tamin’ ny fifidianana ny faha-7 ny volana novambra lasa teo, ary azo tarafina fa mitovy amin’ izay no tokony hisan’ny taratasy fitarainana mipetraka etsy amin’ ny biraon’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Ny Hcc, izay manana 16 andro iasana hamoahana ny vokatra, satria voalazan’ny lalàna fa tokony ho amin’ ny faha -29 ny volana novambra ho avy izao no hamoahan’ izy ireo ny vokatra ofisialin’ ny fifidianana filoham-pirenena.
Vaky bantsilana. Tsy nitsitsitsitsy fitenenana ny mpanolotsain’ny tanànan’Antananarivo, Lalatiana Ravololomanana, omaly teny Ivandry, nanoloana ny mpanao gazety mikasika ny fitantanana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Karazana ampamoaka mihitsy no nataony tamin’izany satria maro ireo nokianiny ...Tohiny